Ny CNaPS ao Mananjary Notokanana ny biraon’ny Masoivoho vaovao
Tafapetraka ny 27 septambara teo ny lanonam-pametrahana ny masoivohon’ny CNaPS ao Mananjary natrehan’Atoa Rakotomila, Directeur Administratif (DA) ao amin’ny (CNaPS),
nisolotena an-dRtoa Tsaboto Joslina, Tale jeneraly vonjimaika notronin’ireo manampahefana ara-panjakana sy miaramila. Tonga tao Mananjary ny CNaPS tamin’ny taona 1990 tamin’ny alalan’ny tendro napetraka tao Masindrano, ary izao nivelatra kokoa izao. Ny CNaPS dia manatona ny vahoaka tahaky ny fametrahana tranoheva 3 tao Bazary Tanambao, Andovosira ary teo amin’ny Tranompokonolona Masindrano. Hetsika natao nandritra ny andro voalohany ny lanonana tao Mananjary hanalana olana ny vahoaka te hifandray aminy mikasika izay tsy mazava hanatsarana ny fiahiana ny mpiasa. Nisy ny fanolorana omby iray ho an’ny vahoaka ao Mananjary tamin’ny anaran’ny CNaPS. “Sady fitsinjovana ny fiavian’ny Faritra vaovao no fametrahana lanja ny vahoaka manontolo izao ary fitsinjovana ny fiainan’ny mpiasa ara-tsosialy sy toekarena amin’ny lafiny mangarahara”, hoy ny ben’ny tanàna. “Sampana vaovao hanampy ireo sampana maro efa misokatra ato amin’ny faritra izao. Efa tombony manokana ny ao Ifanadiana misahana an’Ikongo sy Ifanadiana. Ny eto Mananjary kosa hisahana an’i Nosy-Varika sy Mananjary amin’ny fiarovana ny zon’ny Mpiasa takian’ny Politika Ankapoben’ny fanjakana. Tsy hisy intsony mpiasa Malagasy ho very zo na amperinasa na efa misotro ronono”, hoy Rtoa Razafimandimby Herilala, Talem-paritra Vatovavy-Fitovignany ny asa, fampananan’asa, asam-panjakana ary lalana sosialy raha mitondra hafatra avy amin-dRtoa minisitry ny asa, mpiahy ny CNaPS. Nambarany koa ny faniriany hijoroan’ny foibe misahana ny lalàna sosialy sy ny asa ary ny fampananan’asa ao Mananjary tahak’izay misy ao Manakara.